सेनिटाइजर खादा एकै दिन दुई जनाको मृत्यु !! | सुदुरपश्चिम खबर
विराटनगर : कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नलाई प्रयोग गरिने सेनिटाइजर सेवन गरेका कारण मोरङमा एकै दिन वृद्ध अवस्थाका दुई जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
सेनिटाइजर सेवन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुने बताउँदै डा. दासले सावधानी अपनाउन सबैमा आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सेनिटाइजरको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। कोरोनाबाट जोगिन यसको प्रयोग गर्ने गरिए पनि केही खाने बेलामा भने राम्ररी साबुनपानीले हात धुनुपर्ने बताउँदै डा. दासले नभए त्यसले ठूलो असर पु¥याउने उल्लेख गरे।